Ukuphumla kweParma kunye nendalo
Pizzale, Emilia-Romagna, Italy
Igumbi lakho lokulala e ifama sinombuki zindwendwe onguLa Fattoria Del Boschetto
Le Agriturismo ikwicala lelizwe eliluhlaza leParma kwaye ngenxa yendawo yayo yeqhinga yindawo efanelekileyo yokuqala yokhenketho lwenkcubeko, ilungele uhambo lweshishini okanye ukuphumla emva kohambo olude okanye emva kweeyure ezinde zomsebenzi.
Uya kukwazi ukonwabela ukuthula kwaye uhlaziye amandla akho ngokulala okunzulu kunye nokuhlaziya. Kusasa iya kukuvusa ngevumba lesidlo sakusasa esiyintabalala. Indawo egqwesileyo yenkcubeko nokutya kunye nokhenketho lwewayini
Indlu endala ehlaziyiweyo yasefama, fumana igumbi lokulala elipholileyo elinesibini.
Ngale ndlela, kwindawo emnandi, unokuchitha iintsuku ezolile kunye nokuphumla okanye ukumisa nje emva kohambo olude, zonke zikhatshwa sisidlo sakusasa se-buffet esimnandi kunye neekeyiki zasekhaya kunye neejam. Sifumaneka nje imizuzu eli-10 ngemoto ukusuka eParma Ovest kunye neFidenza ephumayo. Kwimizuzu engama-20 uya kuba sembindini weParma kunye nePiacenza imizuzu engama-30. Kufuphi neParma Fairs.
5.0 ·Izimvo eziyi-11
5.0 · Izimvo eziyi-11
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi11
Kule ndawo intle yasemaphandleni unokuhlala phakathi kwendalo, kwindawo yokuzingela kunye neyokuhlala kwezinye iintlobo zezilwanyana.
Umbuki zindwendwe ngu- La Fattoria Del Boschetto
Per un soggiorno rilassante o un soggiorno culturale..
Emva kokungena siya kuhlala sikhona ukuze sikulungiselele i-aperitif, isidlo sangokuhlwa (ngokubhukisha kwangaphambili) kunye nesidlo sakusasa.
Ixesha lokubhalisa xa ufika: 16:00 - 20:00